दाङमा महिलाको हत्या | Nagarik News - Nepal Republic Media
दाङमा महिलाको हत्या
१० भाद्र २०७३ १ मिनेट पाठ
दाङ–दाङमा एक बृद्ध महिलाको हत्या भएको छ । बिहीबार राति त्रिपुर नगरपालिका १० की ५० वर्षीया बिष्णु ओलीको हत्या भएको ईलाका प्रहरी कार्यालय नारायणपुरले जनाएको छ ।
प्रहरीका अनुसार ओलीलाई धारिलो हतियार प्रयोग गरी हत्या गरिएको छ । उनको घाँटी, ढाड लगायत शरीरका विभिन्न भागमा धारिलो हतियार प्रहार भएको छ । घरनजिकै बाटोमा उनको हत्या गरिएको अवस्थामा राती शव फेला परेको थियो।
ईप्रका नारायणपुरका प्रमुख सई मोहनलाल अधिकारीका अनुसार राति नाच हेरेर फर्कन थालेका केह युवाहरुले ओलीको शव देखेका थिए । ओली घरमा एक्लै रहँदै आएकी र गएराति हत्या भएको प्रहरीले जनाएको छ । हत्यामा संलग्नको पहिचान हुन सकेको छैन । प्रहरीले संलग्नहरुको खोजीकार्य तिब्र पारेको जनाएको छ ।
प्रकाशित: १० भाद्र २०७३ १०:३७ शुक्रबार
जनकपुर राजधानीको वीरगन्जमा विरोध
७ माघ २०७८
अहिले काठमाडौँ उपत्यका महामारीको केन्द्र बनेको छ। यहाँ दैनिक सात हजार सङ्क्रमित देखिन थालेका छन्। महामारी नियन्त्रण गर्न भन्दै लोकसेवा आयोग र त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सञ्चालन गर्ने परीक्षासमेत स्थगन गरिसकेको अवस्था छ भने यातायातका साधनमा पनि जोर–बिजोर प्रणली लागू गरिसकिएको छ।
मुटुसँग मुटु नै किन सिलाएर गयौ?
देखाएर ठूला सपना बिलाएर गयौ, जिउँदै मर्ने गरी विष पिलाएर गयौ। आफ्नै दुनो सोझ्याउनु थियो भने निष्ठुरी, मुटुसँग मुटु नै किन सिलाएर गयौ?
अघिल्तिर तिम्रै रगत लतपतिएको रातो टालोमाथि देशको शासक खडा छ।
यतिबेला मन्त्री यादवले सिके राउतलाई सचेत गराउँदै दिएको प्रतिक्रिया विवादित बनेको छ। उनले भनेकि छिन्,‘फट्टा भाँजेर डराउने प्रयास गर्नेले लट्ठी भाँज्न पोख्तको ताकतलाई नजर अन्दाज नगरोस्। यो रौतहटको गौर मधेस विद्रोहको किल्ला हो उनले भनेकि छिन्,‘यहाँको राइसमिल गौर नरसंहारको साक्षी छ।’ मन्त्री यादवले भनिन्,‘तुफानसँग टकराउन खोज्यौं भने राइस मिलमा जे भएको थियो त्यही हालत हुन्छ।’